MOZIKA RAP : HISINTAKA AMIN’NY GASY PLOIT I AGRAD SY SKAIZ -
AccueilVaovao SamihafaMOZIKA RAP : HISINTAKA AMIN’NY GASY PLOIT I AGRAD SY SKAIZ
MOZIKA RAP : HISINTAKA AMIN’NY GASY PLOIT I AGRAD SY SKAIZ
15/02/2017 admintriatra Vaovao Samihafa, Vaovao songadina 0
Hikopaka elatra. Niasa tao anatin’ny trano mpamokatra hivondronana mpanakanto maromaro, Gasy Ploit, taoriana kelin’ny nidirany teo amin’ny sehatry ny mozika i Agrad sy Skaiz. Ho taonan’ny fahaleovantena ity taona ity ho azy mirahalahy satria hisintaka ao anatin’io trano mpamokatra ireto farany. Tsy misy akory ny disadisa fa ny tsy fitoviam-pijery eo amin’ny fomba hanohizana ny mozika no mety ho anton’ny fanapahan-kevitr’izy ireo. «Tsy misy ny disadisa fa mba te hilalao irery izaho sy Skaiz», araka ny fanazavan’i Agrad. «Ny mozika ataonay ho an’ny tanora sahirana, tsy misy mihaino, miady amin’ny fiainana, fiainana tanora. Nefa raha mbola ao izahay dia tsy ho fantatray ny mpankafy anay», hoy ihany izy. Nahatsapa izy mirahalahy fa metimety kokoa ho azy ny miverina amin’ireo fomba amam-panaony taloha. «Tsy handray ny tenanay ho olo-malaza fa mba te hiverina hilalao eny amin’ny Madarail, Dôme, Cfm… dia mandray ny tanan’ny mpankafy anay», hoy hatrany ny fanamarihany.
Eo am-piandrasana izany, tsy mitsahatra amin’ny famoronana izy mirahalahy. Hira dimy vaovao no efa atolotr’i Agrad ireo mpankafy azy ka ao anatin’izany ny «Maty ho nareo», «MDA», «Hira ny manina»… «Mbola sempotra kely aloha i Skaiz fa mba tsy hampangina loatra dia manolotra ireo vokatra vaovao ireo», hoy ihany izy.
Kandida 13 : Hala-bato ranofotsiny
Tsy takona hafenina ny hosoka sy ny halatra tamin’iny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa, ny 19 desambra teo, iny. Noho izany, hijoro ary hiaro ny tena safidim-bahoaka marina ny avy amin’ ny kandidà Marc Ravalomanana. Ankehitriny, ...Tohiny
Fihaonana ara-diplaomatika : Nanamafy fiaraha-miasa amintsika i Canada
Fanelanelanana iraisam-pirenena : Tonga eto Madagasikara i Ramtane Lamamra
Fanatsarana ny fitaterana an-drenivohitra : HO AVY NY FIARABE AVY AMIN’NY FANJAKANA
Trafika-na « bois de rose » : 1 770 Miliara Fmg